Iran Oo Jooojisay Barnaamij TV Oo Culimadu Ka Cadhoodeen |
Iran Oo Jooojisay Barnaamij TV Oo Culimadu Ka Cadhoodeen
Telefishanka Dawladda Iran ayaa hakiyey tabinta barnaamij laga dheegay ka Ingiriiska ah ee “Who Wants to be a Millionaire” ka dib markii ay ka cawdeen culimada waaweyn iyo muxaafidiintu.
Hogaamiyaha guud ee Aayatullaah Cali Khamenei ayaa ka digay in barnaamijkaa lacagta sida fudud loogu helayaa halis gelin karo “dhaqanka hawl karnimada iyo wax soo saarka” ee dalka.
Wadaad culimada Shiicada ka mid ah ayaa ka Fatwooday barnaamijyada la mid ka ah “Be a Winner” oo ay dadka ka qayb galaa lacag helaan.
Aayatullah Nasr Makarem Shirazi ayaa fatwadiisu waxay xaaraantimaynaysay barnaamijyada lacagta ay ku helaan dadka daawada iyo ka qayb galayaashu.
Makarem Shirazi ayaa ku tilmaamay barnaamijkaa nooc “khamaar” ah iyo “ciyaaro bakhti yaa nasiib ah” waxaanu carrabka ku adkeeyey in ay sharaceeda Islaamku mamnuucday.
Barnaamijka waxa soo jeediya jilaa la yidhaa Mohammad Reza Golzar waxaanay dadka ka qayb galaa ku tartamaan hal bilayn oo Riyal taas oo u dhiganta 25000 oo Dollar waxaanay sidoo kale dadku tartanka kaga qayb geli karaan iyaga oo guryahooda jooga oo adeegsanaya internet-ka.
Wakaaladaha wararka ayaa dhaleeceeyey warbaahinta dawladda ee Idaacadda iyo Telefishanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ee IRIB, oo ku tilmaamay in ay abuurtay “xalaal casino” maadaama oo ay baahiso barnaamijyadaa ay daawadayaashu lacagta khamaarka ah ku tartamayaan.
IRIB ayaa sheegtay in ay baadhi doonto barnaamijkaa Telefishanka ka baxa ee waxaa lagu eedeeyey.
Warbaahinta dalka ayaa tebisay in barnaamijkaa la joojinayo ugu yaraan todobaad, halka madaxda telefishanka dawladduna ka sheegeen in ay ka shaqaynayaan sidii wax looga bedeli lahaa maalgelinta barnaamijka.
Warbaahinta muxaafidka ah ayaa ka baaqday in tallaabo adag laga qaado waxay ku tilmaantay “fadeexadda” waxaanay ku talo bixisay in agaasimaha Channel ka baahiya barnaamijkaa shaqada laga eryo.
Iran waxa laga hir geliyey barnaamijo door ah oo laga soo dheegay kuwo Maraykan iyo Yurub ah oo uu ka mid yahay Britain’s Got Talent mid u dhigma oo la yidhaa Jiilka Cusub.